Anôsy, Androy, Atsimo Atsinanana Zanakazo 20 tapitrisa handrakofana 20ha
Ny alahady 19 janoary izao no hanatanterahana ny fambolen-kazo faobe manerana ny Nosy, ka tsy ho diso anjara amin’izany ny faritra Anôsy, Androy, Atsimo Atsinanana.
Frantsa-Afrika Hanamafy ny fifamatorana misy hatramin`izay
Hisy ny fihaonana an-tampony “Afrika-Frantsa 2020” izay hatao any Bordeaux ny 04 hatramin`ny 06 jona izao. Fihaonam-be faha-28,
sy an’ny mpikambana ao amin’ny Filankevitra kaominaly na ny ben’ny tanàna sy ny lefiny izany volabe izany fa samy tompony isika rehetra mponina manerana ny kaominina, hoy Razafison Rivonala, kandidà mpanolotsaina tohanan`ny antoko Tia Tanindrazana, izay mitondra ny lah. faha-4. Nohamafisiny fa tena ilaina ny fananana fotodrafitrasa vaovao. Tsy tena fampandrosoana anefa no misy raha toa ka miaina anaty tebiteby lava noho ny asan-jiolahy sy ny asan-dahalo isika, tsy mivoatra ny fidirambola isan-tokantrano, tsy afaka miala voly tahaka ny hafa isika ary mizaka ny voka-dratsin’ny faharavan’ny tontolo iainana isika. Tsy maintsy jerena miaraka ny fampandrosoana eny anivon’ny kaominina amin’ny lafiny fihariana, fiarahamonina, kolontsaina ary ny tontolo iainana araka ny and. faha-149 ao amin`ny lalàmpanorenana.